Malunga nathi - Shandong Lu Young oomatshini Co., Ltd.
Shandong Lu Young Machinery Co., Ltd yasekwa ngoJulayi 1996. Sikwindawo Shandong Provice. Singenise iteknoloji yokuvelisa phambili kunye neqela le-R & D ukusuka eKorea ngo-2001 kwaye sakha umzi-mveliso wethu wesithathu kwimveliso yomatshini wase-swiss lathe. Sinako imveliso phezu 1000 iiseti izixhobo umatshini cnc omnye unyaka. Izixhobo zethu zomatshini we-cnc sele zithunyelwe kumazwe angama-40 kwaye zifumana ingxelo entle.
Singabanini beewokers ezimalunga nama-500 kunye neenjineli ezingama-40, ngaphezulu kwama-50000㎡ asebenza kwindawo yokuthenga kunye nendawo yeofisi eyi-1000ice. Iqela lethu leenjineli linamava atyebileyo okukhethwa kwezixhobo kunye nenkqubo yoyilo, sinokukunika isisombululo sobuchule ngokusekwe kwimisebenzi yakho ngokukhawuleza nangokukhululekileyo.
Yonke imishini yethu ye-CNC ihambelana nomgaqo wekhowudi we-ISO wamazwe ngamazwe, kwaye izama ukuphuhliswa ngegama, kunye nenjongo yomthengi kuqala. Ukufezekisa ngokufanelekileyo iimveliso ezisemgangathweni, unonophelo lwenkonzo, ukuhanjiswa kwangexesha, amaxabiso afanelekileyo, kunye nokubonelela abasebenzisi ngemveliso yokusebenza elungileyo, inkampani iyathandwa ngabarhwebi kunye nabasebenzisi ekhaya nakumazwe aphesheya abanesidima esihle kunye nenkonzo ebalaseleyo.
NGAPHEZU KWEMINYAKA engama-20 YOBUGCISA OJONGILEYO OOMATSHINI CNC
Shandong Lu Young Machinery Co., Ltd yasekwa ngoJulayi 1996, ibekwe kwi Shandong Provice. Ithunyelwe itekhnoloji yokuvelisa phambili kunye neqela le-R & D ukusuka eKorea ngo-2001. Zithunyelwe kumazwe angaphezu kwama-40 kwaye zifumana ingxelo entle. Bonke oomatshini baphumelela ukuqinisekiswa kwe-European Union CE kwaye baqinisekisiwe kwi-ISO 9001.
Inkampani yethu imifuziselo ngaphezu kwama-50 umatshini, kuquka ebhedini tyaba kunye ukhuko ebhedini CNC lathe, 3-axis, 4-axis, 5-axis CNC umshini wokugaya, siwss uhlobo cnc lathe umatshini, lathe eziqhelekileyo, sawing machine.
1. Ukucwangciswa komgangatho ophezulu
Amacandelo aphambili athengiswa kwamanye amazwe okanye izinto ezaziwayo zasekhaya, ezinje ngenkqubo ye-FANUC yaseJapan, ukuthwala i-NSK yaseJapan okanye ukuthwala i-FAG yaseJamani, inkqubo yokulawula i-Siemens yaseJamani, i-French Schneider, i-Taiwan ROALY yokuluka, i-OKADA isixhobo sokutshintsha izixhobo, i-Taiwan Hiwin yomgaqo wesikhokelo sendlela, umlawuli we-GSK inkqubo njl.
2. Amandla eR & D aMandla
Sineenjineli ezingama-40 kwiziko lethu le-R & D, bonke banamava ngakumbi kule ndawo.
Kukho izinto ezingama-45 zokuhlola kunye nokuvavanya, iiyure ezingama-48 zokulungisa uvavanyo olupheleleyo lokulungisa umthwalo, kusetyenziswa izixhobo zovavanyo oluphezulu zehlabathi ezinje ngomatshini wokulinganisa wokulungelelanisa kathathu, i-british F interferometer yaseBritane ye-ER, kunye neJapan SIGMA balancer enamandla Ukuqinisekisa ulawulo oluchanekileyo lwazo zonke iinkcukacha zesixhobo somatshini.
Ulungiselelo ngentando, imbonakalo ziyafumaneka. Wamkelekile ukwabelana ngombono wakho nathi, masisebenze kunye ukwenza ubomi bube nokuyila ngakumbi.
Iimveliso zethu zonke zigqitha isiQinisekiso se-CE, kunye nefektri yethu yokupasa isiQinisekiso soMgangatho se-ISO9001. Oomatshini bethu bathunyelwe kumazwe angaphezu kwama-40. Samkela bonke abathengi kunye nabahlobo beze kutyelela efektri yethu!
Ngokubhekisele kumandla obuchwephesha, sinolona phando lobuchwephesha kunye nabasebenzi bophuhliso, abanokuhlangabezana nazo zonke iimfuno ezahlukeneyo kubuchwephesha nakwimveliso. Samkela ukwenziwa kwesiko, sinokwenza umatshini ngokwesicelo sakho. Ukuba unesicelo esikhethekileyo, iqela loyilo lobuchwephesha linokukunika uqwalaselo olufanelekileyo kakhulu nganye nganye.
Kwintengiso bonke bangabathengisi abaziingcali abanokukunceda ukusombulula iingxaki ekuthengeni nakwitekhnoloji enxulumene nezixhobo ze-CNC kunye noomatshini bokuvavanya. Iimveliso zethu zithengiswa kokubini ekhaya nakumazwe aphesheya, kwaye zithandwa kakhulu kwihlabathi liphela.